Però: Mankany amin’ny fihodinana faharoa · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 27 Desambra 2018 3:11 GMT
Ohatra, tao amin'ny Politikeando Perú, lahatsoratra roa no nanintona ny saiko, ny iray amin'izy ireo dia momba ny fanadihadiana nataon'ny tonian-dahatsoratra Amerika Latina ao amin'ny Economist, Michael Reid, tamin'ny resadresaka tamin'ny BBC. Lahatsoratra iray hafa ny “Humala and Chavez: Dangerous and Suspicious Relations (Fifandraisana mampiahiahy sy mampidi-doza eo amin'i Humala sy chavez),” izay mamakafaka ny lalao hafahafa amin'ny fampifanarahana an'i Chavez, Humala, García sy Toledo.
Jomra kosa sahirana amin'ny adihevitra fihodinana faharoa (ho avy): ilaina ny manao adihevitra eo amin'ireo kandidà, miaraka amin'ny tohan-kevitra tsara mifantoka amin'izay tokony horesahina, saingy lavitry ny tokony ho fiafaran'ny adihevitra: fampisehoana ho an'ny sarambambem-bahoaka. Mifantoka amin'ny lohahevitra, Victor Mechan, ao amin'ny bilaoginy Ciencia, mijery izay mety ho vokatra sy ireo mpanohitra ao amin'ny lahatsorany “Elecciones, Perú: Recta Final.” Milaza aho hoe “mpanohitra” satria ankoatra ny adihevitra eo amin'ireo kandidà ho filoham-pirenena, nanomana adihevitra eo amin'ireo mpitarika ny programan'ny governemanta tsirairay sy ireo tompon'andraikitra amin'ny sehatra tsirairay izy ireo. Fantatrao tsara fa izy ireo no mety ho lasa minisitry ny governemanta manaraka.
Lucho Becerra manome antsika lahatsoratra iray izay nivoaka tao amin'ny New York Times ary nadika tamin'ny teny Espaniola: : “The Imminent Peruvian Disaster: an Article of the New York Times (Ny loza mitatao Peroviana: lahatsoratra iray ao amin'ny New York Times.” Milaza ny lahatsoratra fa ny roa amin'ireo safidy ananantsika amin'ny fifidianana fihodinana faharoa dia vao mainka miharatsy kokoa. Zavatra tsy neken'i Rosaelen ao amin'ny lahatsorany: “Superfluous Commentary (Fanehoan-kevitra tsy misy dikany).”
Ao amin'ny lahatsoratra iray izay tsy Anti-APRA [antoko politikan'i Alan García] tahaka ireo hafa novakiako, Litta avy ao Blanca Nieves namely ny iray tamin'ireo hevi-dehiben'ny APRA ao amin'ny lahatsorany “Will García Abandon the Party Platform (Hialan-daharana ao amin'ny Sehatry ny Antoko ve i Garcia)?” Niteraka fanehoan-kevitra maro ny lahatsoratra, tsara ny sasantsasany, ny hafa tsy dia tsara. Misy ihany koa lahatsoratra iray mamaly an'i Litta ao amin'ny bilaogy Free Opinion izay mitondra ny lohateny hoe: “Clarifying ‘Blanca Nieves’ on the Party Platform of APRA (Manazava ny ‘Blanca Nieves’ amin'ny sehatry ny Antoko APRA).”
Etsy ankilany, ny bilaogy Incan Nation of the 21st Century manoratra, avy amin'ny fomba fijery “nasionalista”, “The Topic of Propriety of Strategic Natural Resources: According to Alan and Ollanta.”Ny lohahevitry ny fananana harena voajanahary Stratejika: Araka ny voalazan'i Alan sy Ollanta.”
Farany, Carla mamaly ny fihetsiketsehana izay mivezivezy manerana an'i Lima mba tsy handray anjara amin'ny andron'ny fifidianana ao amin'ny lahatsorany “Abstention Does Nothing (tsy misy dikany ny tsy fandehanana mifidy“